पोखरा फाइनान्सको १५% हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » पोखरा फाइनान्सको १५% हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
काठमाडौं - पोखरा फाइनान्सको १५% हकप्रद सेयर भर्ने आइतबार अन्तिम दिन हो । आज कार्यालय समय भित्र यस हकप्रदमा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । फाइनान्सले पुस ३० गतेदेखि १ः०.१५ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ९ लाख ८३ हजार ६८२.७४ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो ।
यो हकप्रद सेयरमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्सले गरेको हो । लगानीकर्ताले एनआइबीएल क्यापिटल लाजिम्पाट काठमाडौं तथा शाखा कार्यालय लगनखेल, ललितपुरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, पोखरा फाइनान्सको मुख्य कार्यालय न्यूरोड पोखरा र यसका अधिकांश शाखा कार्यालय तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, नारायणगढ, बुटवल र धनगढी शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । आस्वामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सेयर भर्न मिल्छ ।